धनकुटाको कोलबोटेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते - धनकुटाको कोलबोटेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते
धनकुटाको कोलबोटेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते
२०७५, १३ भदौ, 07:51:51 AM
धनकुटा । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ कोलबोटेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते भएका छन् । बुधबार बिहान सुनसरीको इनरुवाबाट धनकुटाको नमस्ते झरना अवलोकनको लागि ३५ जना सवार को. १ ख. ३५८३ नम्बरको बस ब्रेक फेल भएर साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित कोलबोटेमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका एसपी सुरेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए ।
दुर्घटना १७ जना घाइते भएका छन् । ती मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकोे एसपी गुरुङले बताए । दुर्घटनामा परेका सबै घाइतेको धरानमा रहेको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भैरहेको छ । घाइतेहरुको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन । चालक फरार रहेको प्रहरीले बताएको छ ।